JOKER 2 AMATHUBA, ANOMDLA [IPLOTI], IKAMVA, VILLAIN ENTSHA, KUNYE NOHLAZIYO LWAMVA NJE OMELE UYAZI - IIMUVI
UJoker wayeyimiboniso bhanyabhanya enesidima kwaye ikwayifilimu eqaqambileyo engathandabuzekiyo. UJoker ngumdlalo wengqondo ovuselelayo ojoliswe kwaye waveliswa
UJoker wayeyimidlalo bhanyabhanya enesidima kwaye ikwayifilimu eqaqambileyo engathandabuzekiyo. UJoker ngumdlalo wengqondo ohlekisayo owalathiswa kwaye waveliswa nguT Todd Phillips. Ifilimu yayisekwe kubalinganiswa beDC. UJoaquin Phoenix wadlala indima kaJoker kwicala elimnyama kakhulu.
Umboniso bhanyabhanya wawusethwe ngo-1981, malunga nokungaphumeleli komdlali weqonga u-Arthur Fleck. Njengokuba efunda ngakumbi ngokugula kwengqondo, okubandakanya ukuhleka okungalawulekiyo, uyazi malunga nexesha lakhe elidlulileyo. Kuko konke ukungakhathali kunye nokuxhatshazwa luluntu, uza ne-ego eguqukayo, uJoker.
Basabela njani abaphulaphuli?
Imuvi yeJoker inike abaphulaphuli into eyicelayo. Ngokuyibonisa njengemovie ebukhali kwaye emnyama. Iphule zonke iirekhodi kwaye yathathelwa ingqalelo njengeyona bhanyabhanya ibalaseleyo yeDC ukuza kuthi ga ngoku.
Ixesha le-vinland saga 1
Abantu bakholelwa ukuba ukulandelelana kwayo kunokuhluka ngeendlela ezininzi kwaye kungayiguqula i-cinema.
Nangona abagxeki bebegxeka kakhulu imovie njengebhanyabhanya yezengqondo enamacandelo amnyama. Ngaphandle kwabagxeki, ifilimu yafumana umqondiso oluhlaza kubabukeli bemovie.
Kwakhona, amanqaku angasemva, ukwenza, ukuphosa, nayo yonke into malunga neJoker iyaxabiseka.
Ungalindela ntoni kuJoker 2?
Kwi Joker 2 , Abanye babaphulaphuli balindele ukuba uJoker alwe nomntu okhohlakeleyo njengoBatman okanye elinye iqhawe. Nangona kunjalo, indlela uJoker afike ngayo kwisigqibo, wonke umntu ulindele ngokungathandabuzekiyo ukulandelelana.
Enye into enomdla kukuba uJoaquin Phoenix wenza ifoto kunye nomfoti osetiweyo ngexesha lokwenza iJoker.
Kwaye benza iiposta apho babeka khona iJoker kwiimovie ezilishumi zakudala ezinjengeRosemary's Baby, Raging Bull, njl.
Ukusukela ukuba uJoker wawela i-1 yezigidigidi zeedola + kwihlabathi liphela, abantu bagcina ulindelo oluphezulu kwifilimu.
ividiyo ephambili kwindawo ethe cwaka 2
Ekugqibeleni, Imovie yaphela naye edanisa ezantsi kwipaseji yesibhedlele sase-Arkham State, eshiya imikhondo ebomvu ngasemva. Ke, oku kubonisa ngokucacileyo ukuba imovie inokuqala ngoJoker ebaleka esibhedlele nakwindlela yokubulala.
Olunye ulwalathiso lwabalandeli abanokulindela ukuba lo mkhondo uhambe uye kuvavanya ubudlelwane buka-Arthur kunye nomntakwabo-nyana, ngoku yinkedama uBruce Wayne. Nangona kudliwanondlebe, uPhillips uthe ngekhe enze enye into kudliwanondlebe, kodwa kwavela izimvo ngelixa babesenza iJoker.
Ewe, kude kube kuphume imovie elandelayo, abalandeli abayi kuyeka ukwenza iingcinga zabalandeli malunga nomdlalo bhanyabhanya kunye nokwenza ihyphe enkulu kuneyokuqala. Njengoko uJoaquin Phoenix enze konke ukuzithethelela kumlinganiswa kwaye i-DC iphela ifumana imvuselelo ngalo mlinganiswa yedwa.
icule nini ukuphuma
ingwe kunye nexesha lomvundla 2
I-overlord ye-anime yexesha 2 umhla wokukhutshwa
ubukela njani ixesha lobukumkani 3
Ubudala be-adaline kwi-hulu
isigcawu somntu wekhathuni